SomaliaReport: Sarkaal Golaha Qaxootiga Norway oo La Dilay
By AHMED HASSA KHAYRE 11/19/2011
Sarkaal u shaqaynayey Golaha Qaxootiga Norway (NRC) ayaa dabley aan la garanayn ku toogteen ayna ku dileyn habiinkii Jimcihii Gaalkacyo ee gobolka madaxabanaan ee Puntland habee, sida ay sheegeen goobjoogayaal iyo saraakiil.
Afar nin oo maaskaro xiran oo bastoolado ku hubeysan ayaa lasoo tabiyey inay afar goor madaxa ka toogteen Axmed Jaamac Maxamed, sarkaal dhowritaanka ee NRC, markii uu salaadii makhrib kusoo tukaday masjidka Moxamedu Rasuulah oo ku yaal Wadada Israac ee waqooyiga Gaalkacyo.
“Waxay xabad kaga fureen madaxa ilaa intuu ka dhaco. Kadibna way carareen,” waxaa yiri goobjoogayaasha Sahra Jaamac iyo Cali Hubeeye.
Booliisku waxay yimaadeen markay dableydu carartay waxay ku booriyeen inay baari doonaan.
“Dabley aan la garaneyn ayaa dilay Axmed Jaamac oo ka shaqaynayey xafiiska Gaalkacyo ee NRC. Baaritaan ayaan ku jirnaa,” Abshir Cayto oo sarkaal boolis ka ah Puntland ayaa Somalia Report u sheegay.
Madaxda degaankuna way xaqiijiyeen.
“Haa, waa run in ay dabley aaan la garaneyn dileen Axmed Jaamac. Aad iyo aad ayaan uga xunahay. Isku fasal ayaan ahaan jirnay,” sarkaal Puntland ah oo aan ismagacaabin ayaa Somalia Report u sheegay.